Weibo သည် ကမ္ဘာအနှံ့ တွင် ရှယ်ယာ ၁၁ သန်း ရောင်း ချပြီး ရှယ်ယာ တစ်စု လျှင်ဒေါ်လာ ၄၉. ၇၅ ထက်မပို ပါ - Pandaily
Weibo သည် ကမ္ဘာအနှံ့ တွင် ရှယ်ယာ ၁၁ သန်း ရောင်း ချပြီး ရှယ်ယာ တစ်စု လျှင်ဒေါ်လာ ၄၉. ၇၅ ထက်မပို ပါ
Categories: Industry ကိုPandaily နိုဝင်ဘာ 29, 2021 နိုဝင်ဘာ 29, 2021 မှာ Posted
တန လာ င်္ နေ့က တရုတ် ရဲ့ တွစ်တာ လို ပလက်ဖောင်းWeibo သည်ဟောင်ကောင် IPO မှတစ်ဆင့် ကမ္ဘာအနှံ့ ရှယ်ယာ ၁၁ သန်း ရောင်းချ ရန် အစီအစဉ်ကို ကြေငြာ ခဲ့သည်အစုရှယ်ယာ အသစ် ၅. ၅ သန်းနှင့် ရောင်းအား ၅. ၅ သန်း အပါအ ၀ င် ၊။ ယင်းတို့အနက် ဟောင် ကော င်သည် အစုရှယ်ယာ ၁. ၁ သန်း၊ ၉. ၉ သန်းကို နိုင်ငံတကာ တွင် ရောင်းချ ခဲ့ပြီး နောက်ထပ် ၁၅% ကို ခွဲဝေ ချ ထားသည်။
Weibo ၏ ရွယ္ယာ မ်ားကို ႏိုဝင္ဘာ ၂၉ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္အထိ ေရာင္းခ်ေပး သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္အထိ ေစ်းႏႈန္း သတ္မွတ္ မည္ဟု ခန္႔မွန္း ထားေၾကာင္း အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အများပြည်သူ ကမ်းလှမ်း သည့် စျေး နှုန်းသည် ရှယ်ယာ တစ်စု လျှင် ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ ၃ ၈၈ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၉. ၇၅) ထက်မ ကျော်လွန် ပါ။ ထို့အပြင် ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် ဒီဇင်ဘာ ၈ ရက် တွင်ဟောင်ကောင် စတော့အိတ်ချိန်း တွင် Class A ၏ ဘုံ အစုရှယ်ယာ များကို တရားဝင် စတင် ရောင်းချ မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
ယင္း မတုိင္မီ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၈ ရက္က ေဟာင္ေကာင္ စေတာ့အိတ္ ခ်ိန္း (HKEx) စာရင္း စာရြက္စာတမ္း မ်ားအရWeibo သည် စာရင်း ကြားနာ ခြင်းကို အောင်မြင် ခဲ့သည်စာရင်း ပူးတွဲ စပွန်ဆာ များမှာ Goldman Sachs, Credit Suisse, CLSA နှင့် CICC တို့ဖြစ်သည်။
မှတ်သား သင့် သည်မှာ ရှယ်ယာ ဆက်နွယ်မှု ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် Sina နှင့် Alibaba တို့သည် Weibo ၏အရေး အပါ ဆုံး ရှယ်ယာရှင် များဖြစ်သည်။ Sina သည် ကုမ္ပဏီ ၏ရှယ်ယာ ၄၄. ၄% နှင့် Alibaba သည် ၂၉. ၆% ပိုင်ဆိုင်သည်။ ၂၀၂၁ စက်တင်ဘာ ၃၀ တွင် Weibo ဥက္က chairman ္ဌ Cao Guowei သည် ကုမ္ပဏီ ၏စုစုပေါင်း မဲပေး ပိုင်ခွင့် ၏ ၇၀. ၆% ရှိသည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Weibo ၏ ဟောင်ကောင် စတော့အိတ်ချိန်း စာရင်း ကြားနာ မှု ၏တတိယ သုံးလပတ် ဝင်ငွေ သည်တစ် နှစ်နှင့် တစ်နှစ် ၃၀% တိုးတက် ခဲ့သည်
Weibo ၏ ၂၀၂၁ ခုနှစ် တတိယ သုံးလပတ် နောက်ဆုံး ဘဏ္ report ာရေး အစီရင်ခံစာအရ ၀ င်ငွေ သည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆ ၀၇ သန်း ရှိခဲ့ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ခဲ့သည်။ မျှော်လင့် ချက်များ ထက်ကျော်လွန် သော ၀ င်ငွေ အပြင် Weibo ပလက်ဖောင်း အသုံးပြုသူ အရေ အတွက်လည်း သိသိသာသာတိုးတက်လာခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် Weibo သည် လစဉ် တက်ကြွသော သုံးစွဲသူ ၅ ၇၃ သန်း ရှိခဲ့ပြီး ၎င်း၏ မိုဘိုင်း အက် ပလီကေးရှင်း မှ ၉၄% ရှိသည်။ နေ့စဉ် တက်ကြွသော သုံးစွဲသူ အရေအတွက်သည် ၂ ၄၈ သန်း အထိရှိသည်။ ကြော်ငြာ နှင့် စျေးကွက် ရှာဖွေ ရေးတွင် တတိယ သုံးလပတ် ဝင်ငွေ သည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅ ၃၈ သန်း သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ၂၉% တိုးတက်ခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း ဝ င်ငွေ၏ ၈၈. ၆၃% ရှိသည်။
အများပြည်သူ သိရှိ နိုင်သည့် အချက်အလက်များအရ Weibo သည် ကုမ္ပဏီ ပေါင်း ၂၀၀ နီးပါး တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ခဲ့ပြီး နယ်ပယ် ၂၀ ကျော်ကို လွှမ်းခြုံ ထားသည်။ အဓိကအားဖြင့် Round A ငွေကြေး မတိုင်မီ ကြိုတင် ငွေကြေးထောက်ပံ့ မှုတွင်ပါ ၀ င်သည်။ ကြော်ငြာ စျေးကွက် သည် Weibo အပြင် အဆင် ၏အရေးပါ သောနေရာ ဖြစ်သည်။ ယခင်က ထုတ်ပြန်ခဲ့သော တတိယ သုံးလပတ် ဘဏ္ financial ာရေး အစီရင်ခံစာတွင် ကြော်ငြာ နှင့် စျေးကွက်ရှာဖွေရေး သည် Weibo ၏အရေး အကြီးဆုံး ဝင်ငွေ ဖြစ်သည်။
Tencent ၏ TiMi စတူဒီယို အုပ်စုသည် Tianmei Health အမှတ်တံဆိပ် ခွဲ ကို ဖြန့်ချိ ခဲ့သည်
ကိုPandaily Jan 18 Jan 18 မှာ Posted
Tencent၎င်း၏ TiMi စတူဒီယို အုပ်စုသည် အားကစား နှင့် ကျန်းမာရေး ကိုအဓိက ထားသော Tianmei Health အမှတ်တံဆိပ် ကိုစတင် မည်ဟု တနင်္လာနေ့တွင် ကြေငြာခဲ့သည်။
JD.com သည် CCTV Spring Festival Gala အတွက် ပြင်ဆင်ရန် အဖွဲ့ ရှစ် ဖွဲ့ ကိုတည်ထောင် ခဲ့သည်
Xu Lei, တရုတ် e-commerce ကုမ္ပဏီကြီး ၏ဥက္က president ္ဌJingdongအစီရင်ခံစာ များအရ တရုတ် နှစ်သစ်ကူး CCTV ၏ လူကြိုက်များသော နွေ ဦး ပွဲတော် မတိုင်မီ ကုမ္ပဏီ၏ "အနီရောင် စာအိတ်" စီမံကိန်းကို ဦး ဆော င်ရန် ကုမ္ပဏီ ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံတွင် သန်း ၂၀ ကျော် ဒေါင်းလုပ် လုပ်ထားသော အီလက်ထရောနစ် ယွမ် အက် ပလီကေးရှင်း ကို ရှေ့ပြေး စမ်းသပ် ခဲ့သည်
Huawei မှ လုပ် ကို င်သော App Store ဒေ တာ၊XiaomiOPPO, Vivo နှင့်အခြား အဓိက တရုတ် စမတ်ဖုန်း ထုတ်လုပ် သူများက မကြာသေးမီက ဖြန့်ချိ ခဲ့သော ဒစ်ဂျစ်တယ် မိုဘိုင်း အက် ပလီကေးရှင်း ၏စုစုပေါင်း download သည် သန်း ၂၀ ကျော် သွားပြီ ဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။
© 2017 - 2022 Pandaily. မူပိုင်ခွင့်ကိုလက်ဝယ်ထားသည်။